“Anigaa Aqaana Kuwan, Sida Loo Aamusiina Waan Garanayaaye Ha Innagu Mashquulinina” – Madaxweyne Mustafe - Jigjiga Online
HomeSomalida“Anigaa Aqaana Kuwan, Sida Loo Aamusiina Waan Garanayaaye Ha Innagu Mashquulinina” – Madaxweyne Mustafe
“Anigaa Aqaana Kuwan, Sida Loo Aamusiina Waan Garanayaaye Ha Innagu Mashquulinina” – Madaxweyne Mustafe
Jigjiga (JO) – Guddida Fulinta Xisbiga PP qaybta Soomaalida ayaa maanta doortay Madaxweyne ku-xigeen ka cusub ee beddelaya Aadan Faarax iyo Afhayeenka rasmiga ah ee Gollaha Baarlamaanka Deegaanka Soomaalida.
Dhawaan ayay ahayd Aadan Faarax markii loo doortay inuu noqdo afhyeenka gollaha federeeshinka Itoobiya sidoo kalena is casilay afhayeenkii hore ee gollaha baarpamaanka deegaanka.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar iyo xubno ka tirsan guddida fulinta ee xisbiga PP laantiisa Soomaalida ayaa go’aamiyey in Madaxweyne ku-xigeenka laga dhigo Ibraahim Cismaan oo ahaan jiray Mayorka Magaalada Diridhaba.
Maalmihii ka horreeyey madagacaabistan, waxa suuqa ku jirtay hadal hayn iyo dood badan oo ku aaddanayd cidda buuxinaysa booska Madaxweyne Ku-xigeenka hore iyo Afhayeenka baarlamaanka deegaanka ee hore isku casilay, waxaana lala xidhiidhinayey shaqsiyaad dhawr ah oo kasoo kala jeeda gobollo deegaanka ah.
Shacabka ku dhaqan gobolka Faafan ayaa rajaynayay inay heli doonaan Madaxweyne ku-xigeenka ama afhayeenka baarlamaanka, laakiin Madaxweyne Mustafe ayaa si badheedh ah u diiday in midkoodna la siiyo, waxaana uu hadallo bahdilaad ah ka yidhi shir xubnaha uu sida weyn ugu kalsoon yahay ee maamulkiisu ay ku yeesheen Madaxtooyada Jigjiga.
Shirkan oo ay ka qayb-galeen illaa lix qof oo isugu jiray wasiirro iyo shaqsiyaad uu isagu ku kalsoon yahay, waxa lagaga wada hadlayey qofka laga dhigayo Madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka deegaanka.
Sida ay Jigjiga Online u xaqiijiyeen ilo xogogaal u ahaa shirkaas, masuuliyiin qayb ka ahaa kulankaas ayaa ku taliyey in Madaxweyne ku-xigeenka ama afhayeenka Gollaha Baarlamaanka Deegaanka la siiyo Gobolka Faafan oo gacan bidixayn badan ka tirsanayay xukuumadiisa iyo xukuumadii maamulkii hore ee Cabdi Iley ba.
Mid kamid ah masuuliyiintii shirka ka soo qayb galay ayaa hadalkiisu sidan ahaa: “Horta anigu shaqsiyan waxaan madaxweyne ku talin lahaa in markan xubin ka socda gobolka Faafan lagu daro hogaaminta sare ee deegaanka, waxbadana way ka tari lahayd qolyahan aadka u cabanaya iyo culayska siyaasadeed ee isa soo taraya ee arintaasi leedahay. Dee Madaxweyne waad la socotaan in dhul badan laga qaaday, dhibaatooyin badanna kasoo gaadhay xukuumadihii hore. Innaga way inna soo dhoweeyeen, halgankii isbeddelkana waxa ay ka ahaayeen hormuud waxayna iila muuqataa in wakhtigan xaasaasiga ah iyo cabashooyinkan joogtada ah in aan ka xalino oo aanay noqon gal-daloolo la inaga soo galo.”
Madaxweyne Mustafe ayaa si degdeg ah ugu jawaabay, iyadoo hadalkiisii laga dhadhansanayo in uu aad uga warhayo xaalada dhabta ah ee dadka uu sheegayo isla markaana uu ifinayo in aanay ahayn qayb ahaan bulsho ahmiyad sidaa u buuran la siiyo. Waxa uu si toos ah iyo si dadban u tibaaxay in ay yihiin bulsho dhaqankooda iyo waxa ay ku qancaan ba uu yaqaano, waxaanu yidhi: “Qoladan Jidwaaq anigaa adiga iyo intiina halkan fadhidaba ka aqaan. Sow ma ogid inaan Jigjigaawi ahay hadda, muddo dheerna ku noolaa oon ku dhalay kuna dhaqmay? Sow ma ogid inaanu gacal nahay? Sidaan anigu dadka u kala aqaano uma kala taqaanid, kuwan aad ka hadlaysana waan garanayaa waxay ku aamusayaane, ha inagu mashquulinina hadda”.
Shirarkan lagu go’aaminayo xulashada hoggaaminta sare ee deegaanka oo hordhacoodu ahaayeen ka hor intii aanu Madaxweynuhu tegin magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore gunaandkoodiina ahaayeen shalay intii ay soo noqdeen madaxweynaha iyo Aadan Faarax ayaa waxa isaga oo hadalkiisa sii wata uu yidhi: “Hawshani waxaanay idiin dhibin ba, waxaan u yeedhayaa Sulsaan Cabdiraxman Bade iyo Mubashir iyagaa gabadhana la hadli oo hawsha dhamayn, kuna qancin inay tanaasusho. Ta Dadkay noqotay, iyagaa yaqaan siday wax ugu sheegi hadday odayaashii kale u yeedhi iyo haday kuwa qurbaha joogay la hadli ooy dadka wax u sheega odhanba iyo hadii afkoodii kale ay ku wada hadli. Iyaguun baa marka horeba dadka dajin jiray iyaguunbaa hadana dajin. Hawsha waanu kala leenahay akhyaareey. Anagoon maalin kaliya joogin oon cago ku taagnayn baanu kala furfurnay nimankee waabase hadoon dawlad xoogan, dhaqaale iyo wax walba hayno.”
Sida ay u muuqato go’aanadan maanta ay xukuumaddu soo saartay ee lagu magacaabay Madaxweyne ku-xigeenka iyo Afhayeenka Baarlamaankaba, waxa aad moodaa in Madaxweyne Mustafe uu kaga dhabeeyey hadalkiisii maalintaas iyo cabbirkiisii siyaasaadeed ee xaalada dhabta ah ee bulshada gobolka Faafan. Intaa dabadeedna, sida uu Mustafe sheegay laba cali wax iskama waydiin cabashooyinkii iyo dareenkii shacabku qabeen waxaana hir-gashay hadalkii hal hayska noqoday bulshada dhaxdeeda ee markii odayaal iyo salaadiin ay u tageen Madaxweyne Mustafe kana dalbadeen in uu dhagaysto cabashooyinka ku aadan saamiga hogaaminta deegaanka uu yidhi “saameyn idinku malihidin sadkan waxaa iska leh Daawa”.